Self-efficacy Vol. 1 Definition and Advantages | Mycanvas
Self-efficacy Vol. 1 Definition and Advantages
“Self-efficacy” သည်အမူအကျင့်ပြောင်းလဲခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦး အနေနဲ့ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကိုအောင်မြင်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ရန်အတွက် “Self-efficacy” ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ “Self-efficacy” ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို Bandura က သင့်ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိရန်နှင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုအောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ရန် သင့်ရဲ့စွမ်းရည်များအကြောင်းကို သင်ယုံကြည်ထားသောယုံကြည်ချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်။ သင့်ရည်မှန်းချက်နှင့်အိပ်မက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ဖြစ်နိုင်ခြေများကို သင်ကိုယ်တိုင်ထိရောက်စွာမြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်။ ပိုမြင့်မားတဲ့ “Self-efficacy” နဲ့ ဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကို ဒီ Post မှာဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်နည်းလမ်းများကို နောက်တစ်ပါတ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အားသာချက် ( ၁ ) – အားတက်သရောလုပ်ဆောင်ခြင်း
ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ “Self-efficacy” ရှိတဲ့သူတွေကဟာ အသစ်သောအရာများကိုတက်ကြွစွာကြိုးစားလုပ်ကိုင်တတ်ပြီး လျှင်မြန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့က ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ Motivation ရှိတဲ့အတွက် တစ်ခုခုမှာသွားခဲ့ရင်တောင်မှကျော်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ “Self-efficacy” နည်းတဲ့သူတွေက‌တော့ Motivation နည်းလေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့တွေက အလွယ်တကူအရှုံးပေးတတ်ပြီး အရာရာကို အဆိုးမြင်တတ်ပါတယ်။
အားသာချက် ( ၂ ) – ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲသောအပြုအမူ
“Self-efficacy“ သည်အလုပ်ဖိစီးမှုများနဲ့ မီးလောင်ရာလေပင့်အခြေအနေများကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့သည့်အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ “Self-efficacy“ ကြောင့် လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ အပြုအမူတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး “ဘာလို့မလုပ်နိုင်တာလဲ” ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေမယ့်အစား “ဘယ်လိုလုပ်ရင်ရနိုင်မလဲ”ဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေနိုင်စေပါတယ်။ သူတို့ကအကောင်းမြင်သမားတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ “Self-efficacy” နည်းခြင်းက မလုပ်နိုင်တဲ့ဆင်ခြေကိုရှာဖွေရန်နဲ့ သင့်ကိုယ်သင်၊ ဒါမှမဟုတ် အခြားသူများကိုအလွယ်တကူအပြစ်တင်ခြင်းတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်။
အားသာချက် ( ၃ ) – အကောင်းမြင်ရလဒ်များ
“Self-efficacy” သည် စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းသည် တာဝန်များနဲ့ စိန်ခေါ်မှုများကိုပြီးမြောက်စေပြီး အခြားသူများနှင့်လည်း ကောင်းသောဆက်ဆံရေးကိုရှိလာစေပါတယ်။